“ ဒေါင်း တွေဆီက သတင်းစကား ” ကဗျာရှင် လှမျိုးနောင် (88 Generation Students ) ~ ဒီမိုဝေယံ
“ ဒေါင်း တွေဆီက သတင်းစကား ” ကဗျာရှင် လှမျိုးနောင် (88 Generation Students )
“ ဒေါင်း တွေဆီက သတင်းစကား ”
(Message of Peacocks )
ကဗျာရှင် လှမျိုးနောင် (88 Generation Students )
“ ဒေါင်း ” ကို ကြိုးချည်ဖို့လုပ်ရင်
“ ဒေါင်း ” ရုပ်ပဲရမယ်
“ ဒေါင်း ” အုပ်ကို ခွဲဖို့ကြံရင်
“ ဒေါင်း ” အလံ ပြန်ပေး
“ ဒေါင်း ” တို့ရဲ့အတောင်ပံ - ရုန်းထလို့ ... ပျံပြီ
“ ဒေါင်း ” တွန်သံ နားစွင့်ထားကြ . . . ။
ဒေါင်းတွေ ဥမကွဲသိုက်မပျက်စေရေးကို ဆန္ဒပြုလျက်
လှမျိုးနောင် ( 88 Generation Students )
၂၁ . ၁ . ၂၀၁၂ ( စနေနေ့ )